ပတ်ခ်သည် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်၏ အတွင်းပိုင်းကျသော ဂြိုဟ်ရံလတစ်စင်းဖြစ်ပြီး ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ အာကာသယာဉ်မှ ၁၉၈၅ ဒီဇင်ဘာလတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပတ်ခ်၏ ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသည် ယူရေးနပ်စ်ကွင်းနှင့် မီရန်ဒါတို့ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ လုံးဝန်းသောပုံစံရှိပြီး အချင်းအားဖြင့် ၁၆၂ ကီလိုမီတာရှိကာ မျက်နှာပြင်မှာ မည်းမှောင်နေသည်။ ယင်းသည် ရေခဲရေတည်ရှိသည့် လက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။ ယာယီအမည် S/1985 U 1 ဟုပေးခဲ့ပြီး Uranus XV အဖြစ် အတည်ပြုခဲ့သည်။
8.21 km/s[မှတ်စု 1]
~82,400 km² [မှတ်စု 1]
~2,225,000 km³ [မှတ်စု 1]
~2.9 × 1018 kg[မှတ်စု 1]
0.028 m/s2 [မှတ်စု 1]
0.069 km/s [မှတ်စု 1]
Thomas Veverka et al. 1987.
Smith Soderblom et al. 1986.
Dumas Smith et al. 2003.
USGS: Planet and Satellite Names and Discoverers.
"Voyager observations of 1985U1" (1987). Icarus 72 (1): 79–83. doi:10.1016/0019-1035(87)90121-7. Bibcode: 1987Icar...72...79T.
Marsden, Brian G. (January 16, 1986). "Satellites of Uranus and Neptune". IAU Circular 4159. Retrieved on 2012-01-24.
USGS/IAU (July 21, 2006)။ Planet and Satellite Names and Discoverers။ Gazetteer of Planetary Nomenclature။ USGS Astrogeology။ 2012-01-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် Puck (moon) နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။